Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » IDelta iqala kwakhona kwiNqwelomoya yeAtlanta-San José
Airlines • isikhululo • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • iindaba • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba zase-USA ezaphulayo • Iindaba ezahlukeneyo
Unxibelelwano olubuyiselweyo neSikhululo senqwelomoya esiMnyama seHlabathi sonyusa ukufikelela kwihlabathi kwiSikhululo senqwelomoya saseSilicon Valley.
Uhambo ngenqwelomoya ubusuku bonke lusuka eSan José ngo-10: 55 PM (PST), lufika eAtlanta malunga neeyure ezi-4.5 kamva ngo-6: 30 ekuseni.
I-Delta Air Lines isebenzise inqwelomoya ye-Boeing 757 kwiinqwelomoya zaseSan José-Atlanta.
Imigca yomoya eDelta yarhoxisa inkonzo phakathi kwe-SJC kunye ne-ATL ngo-2020 ngenxa yesibetho se-COVID-19.
Ukuqala ngokuhlwanje, abahambi baya konwaba ukufikelela ngakumbi kunye nokukhululeka xa bebhabha ukusuka eSan José ukuya eAtlanta. Amagosa at UNorman Y. Mineta Isikhululo senqwelomoya saseSan José (SJC) ubhengeze namhlanje ukuba yonke imihla unstop service ukuya IHartsfield-Jackson Atlanta International Airport (i-ATL) phinda uqhubeke Delta Air Lines ngoku kuhlwa.
Inqwelomoya ehamba ngobusuku bonke isuka eSan José nge-10: 55 PM (PST) ngenqwelomoya ye-Boeing 757, ifika eAtlanta malunga neeyure eziyi-4.5 kamva ngo-6: 30 AM (EST).
Amagosa esikhululo seenqwelomoya abonisa ukuba ukugcwala kwehlobo, ukuhamba ngenqwelomoya, nokuphinda kuvulwe iivenkile zokutyela, iivenkile kunye neminyinyiva kubonisa ukomelela kwe-SJC kunye nabalingane bayo. Ngelixa uRhulumente waseCalifornia esusile ezinye iimfuno ze-COVID-19, abahambi kusafuneka banxibe iimaski, kwaye isikhululo seenqwelomoya siyaqhubeka ukukhuthaza ukudideka kwezentlalo.
"Ukubuyela kwinkonzo eAtlanta kubonisa isiganeko ekubuyiseni uhambo," utshilo uJohn Aitken, uMlawuli kwisikhululo senqwelomoya saseMineta San José. “Kukuqala kwesibini kweDelta kwezi veki zininzi, kwaye benze umsebenzi omkhulu wokucwangcisa baphinde bazise iimarike eziphambili ngokulandelelana kwenani labakhweli elandayo. IHartsfield-Jackson Atlanta International sesona sikhululo seenqwelomoya esixakekileyo emhlabeni, kwaye sonwabile ukunxibelelana kwakhona nesixeko saseAtlanta kunye nothungelwano lweendawo ekufikelelwa kuzo. ”
IAtlanta ibuyela kuluhlu lwenkonzo yomoya eDelta e-SJC kulandela ukuqaliswa kwenkonzo engapheliyo eMinneapolis-St. Paul (MSP) ovela kwi-SJC ngoJulayi 19. IDelta Air Lines inqumamisa inkonzo phakathi kwe-SJC kunye ne-ATL ngo-2020 ngenxa yobhubhane we-COVID-19 kunye nokuhla okunxulumene nokuhamba.